:::www.somalitalk.com::: Faallo: Hasha Labada Geel jecel ! ( Gari labo kama wada qosliso !)
Faallo: Hasha Labada Geel jecel ! ( Gari labo kama wada qosliso !)
Waxaa ugu horeeya dowladii ku meel gaarka ahayn ku sii dhowdahay todoobaadkii afraad ee muqdisho ku sugan tahay dowladu waxaa ay ka degtay muqdisho Iyadoo ka joog la leeyhay ay ku adkeeysatay in ay muqdisho ka shaqeeyso airportka muqdisho ka degtay. Madaxayadiina iyo PM u hoyden guriga somalida ( Villa Somalia ) arintaas waxaa ay soo jiidatay indhaha caalamka iyo somalida meel kasta oo ay joogto.
Waxaa iyadana muuqaal wanaagsan noqotay in dowladu aanay u jawaabin , madaafiicdii lagu garaacay, madaxtooyada iyo xarumaha kale ee ciidamada afrikaanku joogaan taasoo uJeedad alaga lahaa ay ahayd in shicibka laga hor keeno.
Shiikh axmed daahir aweeys oo nabadoon soomaliyeed ah ayna walaalo yihiin Sh. Hasaan daahir oo dagaal ku baaqe ah ayaa hayd arinta ugu hadal heeska badan ee muqdisho isagoo xasilyey , xagoog dagaal doon ahaa kuna baaqay in nabada jaanis la siiyo , kadib markii culimo uu ku jiro ku guuleeystay in shacabka loo cadeeyo in wax lagu dagaalamo aanay jirin oo dowlada la raaco.
ku dhawaaqidii dowlada omar cabdirashid oo ay hurmuud ka yiihiin rag iyo dumar Somali nimo lagu yaqaan ayaa ahayd arin aad loogu riyaaqay inkasta oo dhaliilo yar iska jireen oo ku saabsan magacaabida golaha wasiirada . laakiin gari laba kama wada qosliso ayey soomalidu ku maahmaahda
Taageeradii shacabka muqdisho muujiyeen in ay xajistaan amaankooda oo aan qalqal laga galin ayey ahayd tallaabdii ugu habooneed ay reer muqdisho qaadaan . waxaa soo dadajiyey talaabooyinka culimda soomaliyeed ee shirka ku yeeshay muqdisho ee hogaamiyo ahmed salad, kuwa majmaca cumlumada soomaliyeed ee sh. Axmed dhicisow iyo dagaalkii aan lga fiirsan ee xusbul islaam.
Wareesigii sh. Yousef indhacadee uu la yeeshay BBC ayaa iyaduna kentay I ragii dagaalka waday ay inkiraan in arinta ku leg leeyihiin kadib markii wariyihii wareeysanay waa Yusuf -Garaad Omar ahmede u cadeeyey inaanuu bunka uga dhimi doonin Kuwa ummada ku haya Xasuuqa. Sh omar imaan iyo fadwdiisii markaas ayaa u danbeeysay.
Sidoo kale waxa todobaadkan soo maray arimo aanay ka maqsuudin shacabka soomaliyeed , Gaar ahaan kala daadsanaan ka muuqata xafiiska madaxwaynaha iyo kan wasiirka koowaad iyadoo aanay wali diyaarin raggii iyo dumarkii xafiikooda ka shaqeeyn lahaa gaar ahaan warbaahinta oo looga hore maray. waxa wax lala yaabo ah in madaxaxweynaha oo shir jariid qabanaya ay u hadalkiisu u muuqday nin aan diyaar ahayn oo laba askari oo afrikaan ah oo kaliya dhinac ka taagan tahay ,waxaa ka rabay inuu muujiyo inaanu jabhad ahayn ee yahay madaxwayne qaran soomaliyed. Waa sidiisi iyo dibad jeceyle waxaa u dhaqaaqay safar iyadoo wasiirkii koowaad joogo. Miyaanay ahayn in madaxwaynuhu joogo oo magaaladiisa nabad ka keeno. Wasiirka koowaadna shaqo u baxo. Maxa is daba marsan.
Arinta ugu horeeysay waxaa ay noqotay in shariif xasan oo beryanahan dhaliilo badan loo soo jeediyey , talaabadii ugu horeeysay ay noqoto inuu booqasho ku tago dekada oo la leeyhay waxaa la doonayaa in lacagteeda lala soo wareego . isla markaan aanu ka jawaabin warbixino laga qoray oo sheegaya inuu doonayo inuu ku tagri falo canshuurta qaranka , ee dekadaha iyo airpotka , kadib markii ay iska daaqayeen dhiigmiirato aan dowladnimo aqoon oo sidii hogaamiyekooxeed u dhaqma. Ma xuma laakiin siyaasad in la dhiso dakedaha dhan ee somaliya lagu howlgalinaya ayaa muhiim ah. Laga qabanayo shaqooyin dhaqaale ururin iyo talooyin isku mid ah. Laga bilaabo , tan muqdisho, bosaaso iyo meelihii kale ee dowladu ka taliso iyo sida daqli looga heli karo federal ahaan. Waxaa ay ku wanaagsaneed inuu tago isbitaalada madiino, dayniile , cisaleey marka hore oo soo booqdo shacabka halkaas ku dhibaateeysan.
Waalidii siyaasadeed iyo aflagaadiadii laga soo wariyey Cabdiraxmaan ibbi. Wasiirka kaluunka iyaa iyaduna noqotay arin walaac ku abuurtay somalida dibada iyo gudaha si isku mid ah. Waxaase ka daran in dowlada uu ka warbidiyo dagaal u oomana la yiraahdo sh .Muuse caraale oo idaacad ksta taagan…waa yaabe aaway wasiirkii warfaafinta ee dowlada, afhayeenkii madaxwaynahe ( Ciise cadoow) . kii raisal wasaaraha ma waxaa ka war badiyey wadaad aan la aqoon . isaga ayaa la rabaa in howshaas loo dhiibo hadii anaay hanan karin .
Booqashadii addis ababa ee geesigii Omar xaashi ee ku caan baxay inuu yahay kii ka sifeeyey , gobolada dhexe cadowga amxaarada ayaa waxaa ay noqotay wax aan caqliga gali Karin. Maanaa waalan mise cadan ayaa laga heesayaa . itoobiya somaali oo dowlad noqota ma dooneeyso . sharafna uma heeyso qarankeena soomaliyeed . Markii uu PM , Sanawi ay kulmeen shariif waxaa uu ugu yeeray qofkaan ( this person) . tasoo ay ka muuqato yasid tii ugu xumeeyd ee madaxweyne qaran loo geesto kadib markii magaciisa xitaa lagu dhawaaqi waayey. Waa maxay sababta cumar xaashi ku kaliftay inuu itoobiya aado. qaybdiid gartaye , xagee loo wadaa copy amxaaro. Waxaan shaki ku jirin meel kasta oo ay tagaan in loo baahan yahay in loo furo tababar looga sifeeynayo wixii lagu soo shubay. Socdaal aan laga fiirsan !
Waxaa maqan in sh . Shariif Tuso show of force iyo inuu sameeyo dhaqdhaqaaq magaalada dhexedeeda ah oo booqanayo airport, dekada, masaajidka isbaheeysiga, isbitaal madiina si uu tusiyo ummada inaanu ahayn nin cabsanaya oo ku hoos jira ciidamada afrikaanka ah.
ka maqnaashihii dowalda ragii ugu caansanaa wasiiradii Nuur cadde ayaa iyaduna dhabar jab ku noqon doonta dowlada hadii aanay soo afjarin saluuga ka muuqda ragiii wax ka diyaariyey in dowladaani dhalato oo shacabka ay helaan dowlad Midnimo qaran. Oo ay hada ka muuqato dowlad midnimo Shariif iyo ragiisii. waxaan oran lahaa Miro barde duuduub ayaa laa cunaa , waa in dowladu iska dhaafto nin tooxsiga iyo kani waa saaxiibkeey oo lagu soo daro dowlada qofkasta oo aan looga maarmin qaranimada soomaliyeed.
Dowladu waxaa ay ka gaabsatay oo aanay marna ka hadal dagaalkii ahlu sunna waljameeca ku qaadeen gobolada dhexe oo itoobiya daba ka riixeeyso( Wabxo to Dacda-Guryasamo) . Golaha wasiiradu marna kama hadal waa yaabe dowladu miyaanay masuul ka ahayn shacabka dagaalamaya oo xitaa oran weeysay dagaalka hala joojiyo raalina kama nihin. In ay u hadasho sidii dowlad. Sidoo kale waxaa la burburiyey biyooleey, kama hadal , waxaa la dilay laba nabadoon oo balcad ka soo jeeday, kama hadal. PM waxaa uu ku socdaa jid mugdi ah oo aan iftiin la raaco oo looga baxo aan ummada tusinin. Hadii ay sidaas ku wadaana waxaan shaki ku jirin in ay noqon doonaan kuwo ka liita tii cabdiqaasim salad iyo tii Cabdilaahi yousef ahmed.
Arinta Ugu qaabka daran ee dowladu la kulantay bishaan waxaa ay tahay markii dowladu noqotay mid kale hadasha oo aan xiirrsaneeyn. Kadib markii ay cadaatay in wasiirada dowlada aanay si toos sh u wargelin ulana xirirrin wasiirka kowaad. Kadib markii ay isku dayday ind dowladu qariso hankeeda siyaasadeed oo dowlada . dowladu kama qada qoslin karto Wakiilka qaramada midoowbay oo isagu ah ( de facto PM) iyo shacabka soomaliyedd , gaara ahaan reer muqdisho oo lagu marin habaabiyey in ciidan afrikaan oo kale aan dalka la keenin, sideedaba yaa diidan in ciidan shisheeye la keeno muqdisho, labo qolo ayaa diidan mid waa dadkii xooga ku heeystay shacabka somaliyeed 20 sano ee la soo dhaafay, kan labaadna waa urur diimeed doonaya in ay meesha xoog ku qabsadaan. Hadii ciidamada dowlada afrikaanka ah aanay xamar joogin, dowladu kama taliseen, airport, dekeda iyo madaxtooyada oo dadkaas diidan ayaa mar hore qabsan lahaa. Sidaas darteed dowladu waxaa u baahan tahay in ay shacabkeeda u cadeyso in ciidanka afrikaanku ah ay u baahan yihiin inta dib u heshiisiinta alshaaab laga dhameeystirayo. Inta ciidan somaliyeed s dhismihiisa lagu jiro la soo dhameeynayo. Hadii aanay dowladu arintaas xalin waqtiga dhow waxaa iman doonta in ay lumiso taageeradii shacabka oo loo arko in tahay mid laba canleeyn ku jirta. Somalidu waxaa ay ku maahmaahdaa “ Hasha labada geel jecel meel dhexe ayaa dhurwaagu ku cunaa “
Hussein Abdikarim ahmed-Gendish